एसइई नजिता : अनावश्यक टिकाटिप्णी र आशंकाले बालबालिकामा नकारात्मक असर – newslinesnepal
एसइई नजिता : अनावश्यक टिकाटिप्णी र आशंकाले बालबालिकामा नकारात्मक असर
प्रकाशित मिति : ८ भाद्र २०७७, सोमबार १२:४०
(नि.सचीव नेशलन प्याब्सन)
आफ्नो आङकाे छारो कनाएर आफैंमा धुलो उडाउनुभन्दा नकनाउनै बेस”भने झैँ हामी के कुरा प्रचार प्रसार गरेर बाहिर ल्याउन हुन्छ के कुरा ल्याउन हुँदैन भन्ने कुराको ख्याल नै नगरी आफैंलाई अफ्ट्यारो हुने काम गरिरहेका छौं । ठिक बेठिक के हो भनेर छुट्टाउने कुनै निकाय नै छैन् । कति कुरा बाहिर ल्याउँदा प्रचारप्रसार गर्दा वा नल्याउँदा कति हितकर छ छैन भन्ने कुरा राम्रोसँग सोचबिचार गरेर ल्याउँदा त्यसको परिणाम सहि आउन सक्छ ।
त्यसैले यस्तो कुरा बाहिर ल्याउनु पर्दा एकपटक सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरि राम्रो नराम्रो बुझेर मात्र समाचार बनाउँदा सामजिक रुपमा जिम्मेवार भैइन्छ । यस पटक एसइर्ईको परीक्षाफल प्रकाशितपछि विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । कोरोनाको कारण एसइर्ईको परीक्षा नभएपछि विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको थियो। सामाजिक सञ्जाल र चिया गफमा समेत एसइईको मापदण्ड खस्किएको, विद्यालयले सित्तैमा प्रमाणपत्र दिएको लगायतका टिप्पणीले बालबालिकामाथि अनावश्यक रुपमा नकारात्मक असर परेको कुरा तपाई हामी आफैं पनि अनुमान लगाउन सक्छौं ।
शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले पनि यहि कुरा उठाइरहेका छन् । तर यहाँ कोहि कसैले पनि जति बुझे पनि बोल्दा चर्चा कमाइने भएकोले होला कुनै सोच बिचार नै नगरी बोल्नाले अफ्ट्यारो परेकोछ । पहिला बोल्ने अनि प्रतिक्रिया आएपछि बल्ल सच्चाएर आम जनताको भावना अनुसार बोल्नेलाई पनि बुद्धिजीवी भन्न मिल्छ ? त्यो भन्दा त आम जनता नै बढी बुझ्ने छन् । के सहि के गलत भन्ने कुरा त तुरुन्त भन्छन् । यहाँ त अनावश्यक रुपमा टिकाटिप्णी गर्ने अनि कसैको राम्रो बन्न , सरकारको पक्ष वा विपक्षमा उभिन,आफ्नो ब्यक्तिगत फाइदाको लागि अरुलाई असर पर्ने खालका कुरा उठाएर मिडियामा आउन तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। कुरा राख्ने नै हो भने कसैलाई असर नपर्ने गरि सहि र गलत के हो भनी राम्रोसँग अध्ययन गरि बोल्नु पर्छ ।
कोरोना भाइरस महामारी त्रासका कारण परीक्षाको पूर्ण तयारीपछि अघिल्लो दिन एसइई स्थगित भएको थियो । यसरी परीक्षाको अघिल्लो दिन परीक्षा स्थगित भएपछि कतिपय विद्यार्थी परीक्षा दिन नपाएर खिन्न भएका थिए । एसैइइको परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि भने विद्यार्थीको मनोविज्ञान नै प्रभाव पर्ने खालका प्रतिक्रिया आइरहेका छन । नौ वर्षसम्म विद्यालयले मूल्याङ्कन गर्दा कसैलाई केही नहुने तर अन्तिम वर्ष वा दशौं वर्षमा मूल्याङ्कन गर्दा चाहीँ नकारात्मक टिप्पणी हुनु दुःखद् कुरा हो । उत्कृष्ठ राम्रो पढ्ने विद्यार्थीका लागि भने आन्तरिक मूल्याङ्कनले चित्त नबुझेको कुरा सहि हो । यो राम्रो नराम्रो जे भएपनि नभए पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया आएजस्तो भने पक्कै भएको छैन् । विद्यालले विद्यार्थीको अध्ययन र क्षमताकै आधारमा परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पठाएको मापदण्डका आधारमा परीक्षाफल पठाएका हुन । हुन त पहिले पहिले पनि एसइईको परीक्षाफल प्रकाशित हुँदा चर्चा परिचर्चा अलि बढी हुने र अरू बेला कम हुने गरेकै हो । केही वर्षअघि प्रवेशिका परीक्षा एसएलसीलाई अहिले एसइईमा रुपान्तरण गरिएको हो। परीक्षाको नाम भिन्न भएपनि परीक्षाको ढाँचा एकै किसिमको छ। एसएलसीमा दिइने श्रेणी (डिभिजन)लाई एसइइमा ग्रेडिङका रूपमा प्राप्ताङ्क दिइएको मात्र हो । अरु खास केही फरक छैन ।
समय परिस्थितिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मानी मूल्याङ्कन गर्ने पद्दतिको ढाँचामा परिवर्तन भएको मात्र हो । एउटा विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थी दशौं वर्षदेखि मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ । प्रत्येक दिन ६ घण्टासम्म शिक्षक विद्यार्थीसँगै रहेर अध्ययन गरेका हुन्छन् । तल्लो कक्षामा यही मूल्याङ्कन वैज्ञानिक ठहरिने र माथिल्लो कक्षा १० मा भने अवैज्ञानिक ठहरिने हुँदैन भन्ने कुरा विश्वास लिन सक्नुपर्छ । एउटै परीक्षाले विद्यार्थीको भविष्य किटान गर्न नसकिने भएकाले अनावश्यक प्रतिक्रियाले विद्यार्थीको मस्तिष्कमा समस्या उत्पन्न हुने गरि यस्तो विषयमा अनावश्यक टिकाटिप्पणी गर्नु राम्रो कुरा होइन । विशेष परिस्थितिले एसइई परीक्षा गराउन नसकिएपछि तत्काल आपतकालिन उपाय अनुसार उत्कृष्ठ ढाँचा तयार गरि समस्या हल मात्र गरेको हो । खासमा भने तीन घण्टा परीक्षा दिएर गरेको मुल्यांकन भन्दा अहिले गरिएको मुल्यांकन वास्तविक रुपमा ठिक हुनसक्छ । तीन घण्टा लेखेका भरमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिनु राम्रो र उत्कृष्ट कुरा होइन । विगतका परीक्षा प्रणाली पनि वैज्ञानिक थिएनन् र अहिलेको त मात्र यस वर्षको लागि बनाइएको मापदण्ड भएकाले त्यति प्रभावकारी भने नभएको हुनसक्छ । वास्तविकता माथि छलफल गर्ने नै हो भने शिक्षकले विद्यार्थीको सबै पक्ष बुझेरै मापदण्ड बनाएका हुन्छन् । त्यसैले यसलाई हचुवाको भरमा नकारात्मक टिप्पणी गर्न मिल्दैन र गर्नु पनि हुन्न । तपाईं हामीले गर्ने यस्ता खालका टिप्पणीले बालबालिकाको बालमनोविज्ञान र मनो­सामाजिक प्रभाव पर्न गैइ जे कुराको लागि टिप्पणी भएको हो तेहि कुरामा असर परिरहेको हुनसक्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बाहिरी टिकाटिप्पणीले बालमनोविज्ञानमा असर गर्ने हुँदा यसबाट सचेत भएर तपाईं हामी अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । यो नतिजा तयार गर्दा अघिल्लो वर्षको परीक्षाफल, आन्तरिक परीक्षा, आवधि परीक्षाका आधारमा यसपालिको मूल्याङ्कन गरिएको हो । परिस्थितिजन्य परीक्षाका रूपमा एसइर्ईको परीक्षा भएकाले यसबाट सबै परीक्षाको मूल्याङ्कन भने नहुन पनि सक्छ। कति विद्यालयमा सबै कुरा थाहा नपाएर पनि नतिजा अलि अलि तलमाथी भएको हुन सक्छ । यसरी केही गरि कतैबाट गल्ती भएको पाइएमा सबैभन्दा पहिले समस्या कहाँ ? कसरी भएको हो ? त्यो कुराको जानकारी राखेर अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ । आफ्नो हातमा आएका बेला अलि अलि केहि विद्यालयले परीक्षाको मूल्याङ्कनमा तलमाथि गरेका होलान् तर यसो भन्दैमा सबै विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक शिक्षिकालाई एउटै ठाउँमा मुछ्नु हुँदैन । यदि कसैले साच्चै गल्ति नै गरेको छ भने आन्तरिक रुपमा छानबिन गरि कार्वाही गर्नुपर्छ ना कि यसरी बालमनोविज्ञान मनो­सामाजिक प्रभाव पर्ने गर्ने गरि अनावश्यक रुपमा मिडिया बाजि गरेर चौतर्फी हल्ला गर्नु हुँदैनथ्यो । यस्ता कुराहरुलाई आन्तरिक रूपमा सरोकारवालाहरु बसेर मिलाउनु नै बेस हुन्थ्यो । आशा छ अब आउँदा दिनमा यस्ता किसिमका समस्याहरु आउँदा प्रचार प्रसारभन्दा पनि सहि र गलत छुट्टाउँदै बिना नोक्सानी समस्या हल गर्नतिर हामी सबैजना लाग्ने छौं ।